थप Googling छैन ... तर तपाईं याहू सक्नुहुन्छ! | Martech Zone
आइतबार, अगस्त 20, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो सिएटल टाइम्स रिपोर्ट गर्दछ कि गुगल मान्छेहरूको पछाडि जाँदैछ तिनीहरूको व्यर्थको व्यर्थ प्रयोग गरेर। मार्केटिंग पिल्ग्रिमले एक राम्रो पायो ब्लग पोस्ट Yahooer बाट जो यसो भन्छ ... तपाई Google लाई सक्नुहुन्न तर Yahoo!
एक व्यापक गतिमा, याहू! राम्रो छ र गुगल कर्पोरेट jerk भएको छ। मैले केहि स्कुरिंग गरें र किन Google ले कुनै प्रतिक्रिया देखेको छैन किन उनीहरूले यो कदम चाल्ने छनौट गरे। मलाई लाग्छ कि यो एक उत्कृष्ट भाइरल मार्केटिंग टेकनीक हो ... विश्वमा नयाँ क्रियापद परिचय गराउँनुहोस् जुनमा तपाईंको व्यवसायको नाम छ, र तपाईं गुनासो गर्न लाग्नुहुन्छ? अर्को कुरा जुन तपाईलाई थाहा छ म्यूजिक ईन्डस्ट्री हावामा परिणत हुन्छ र महान संगीत साझा गरीरहेका मानिसहरूले मुद्दा चलाउन थाल्छ! (ओह प्रतीक्षा गर्नुहोस् ...)
गत बर्ष व्यापार यात्रामा हुँदा मैले गुगलको हेडक्वार्टर भ्रमण गर्न सकें। म क्याम्पस, स्कूटरहरू, भान्साकोठा, मसाज कुर्सीहरू इत्यादिमा छक्क परें। मेरो विचारमा केहि विचारहरू आइपुगे। तर अब यो देखिन्छ कि कर्पोरेटहरू आधिकारिक रूपमा क्याम्पसमा छन्। यो को एक संकेत थियो जब क्याम्बरियन हाउस एक हजार पिज्जाको साथ गुगल फिड गर्न कोशिस पछि क्याम्पसमा बुट गरियो।
कम्पनीहरूको लागि जो वास्तवमा भाइरल मार्केटिंगमा आधारित सफल छन्, यो मेरो लागि अचम्मको कुरा हो कि जब अवसर आउँछ वास्तवमा उनीहरू कसरी कूल 'शान्त "देखाउँछन् कि उनीहरू आफू हुन् भन्छन्, तिनीहरू केवल मूर्ख छन्। Best Buy ले यो गत बर्षमा गर्‍यो जब इम्प्रोभ एभर्वेसमा दुई सय मान्छेहरू बेस्ट बाय खरीददारहरू जस्तो देखिन्थ्यो र उनीहरूलाई पछि त्रास दिइयो, पुलिसलाई बोलाइयो, र तिनीहरूलाई बुट दिइयो।
तल लाइन, यदि तपाईं मान्छेहरू नयाँ, हिप, शान्त, बम, तंग, आदि आदि भन्न लाग्नुहुन्छ भने ... त्यसोभए तपाईं एकल बेवकूफ चलाएर गडबड गर्नुहुन्न। गुगलले भर्खरै मेरो कूलमोमीटरमा १० डिग्री छोडे।
प्रिय श्रीमान् गुगल,
कृपया मेरो जीमेल, पाठक, रद्द नगर्नुहोस् विश्लेषण, म्यापि ap एपीआई, छलफल फोरम, वा गुगल गृह पृष्ठ खाताहरू। मलाई अझै लाग्छ तपाई सुन्दर हुनुहुन्छ। होईन as ठुलो।
याहू! यस अवसरको फाइदा लिनु पर्छ। तपाइँ याहू गर्दै हुनुहुन्छ?
अगस्ट 21, 2006 बेलुका 4:16 बजे
गुगलले आफ्नो नामको सुरक्षा गर्नुपर्छ वा यसले आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार गुमाउनेछ र कुनै पनि अश्लील साइटले ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न शब्द प्रयोग गर्न सक्छ। पक्कै पनि याहूले तपाईलाई याहू! क्रियाको रूपमा। तिनीहरूको टिभी विज्ञापनहरू सम्झनुहोस् जसले सोध्यो "के तपाई याहू!?" दुर्भाग्यवश, कसैले याहू गरेन। तर बिना कुनै विज्ञापन, मानिसहरूले गुगलिङ गर्न थाले। Yahoo को लागि कति लाजमर्दो! तपाईंले विज्ञापन वा शीतलताको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्न, जुन तपाईंलाई क्रियामा परिणत गर्दछ।
क्याम्ब्रियन हाउस मुद्दाले गुगलको ठूलो डार्क साइड देखाउँछ: यो गोपनीयता हो। सबैजना जो गुगल सम्पत्तीमा निमन्त्रणा बिना पाइला राख्छ बुट अफ हुन्छ। मलाई बुट अफ गरिएको छ। यो बरु रमाइलो थियो।
अगस्ट 21, 2006 बेलुका 6:07 बजे
Google लाई यसको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा म तपाईंसँग सहमत हुन चाहन्छु; जे होस्, मलाई सधैं यो चाखलाग्दो लाग्छ कि पैसा प्रवाह नभएसम्म कम्पनीहरूले गुनासो गर्दैनन्। गुगलले स्टार्टअपको रूपमा गुनासो गरिरहेको थिएन जब मानिसहरूले 'गुगलिङ' शब्द प्रयोग गर्न थाले; तिनीहरू ध्यानको लागि प्रायः भोका थिए। यद्यपि, अब उनीहरूले कानुनी विभाग किन्न सक्नेछन्, यो अविश्वासनीय देखिन्छ अब तिनीहरूले आफ्नो राम्रो नाम जोगाउन प्रयास गर्न जाँदैछन्।
यो रेकर्ड उद्योगको पर्यायवाची हो। जब तपाईं एक ब्रोक संगीतकार हुनुहुन्छ, तपाईंले मानिसहरूलाई सुन्नको लागि बिन्ती गरिरहनुभएको छ... जब तपाईं करोडपति हुनुहुन्छ, तपाईंले RIAA सँग मिलन र मुद्दा हाल्न थाल्नुपर्छ।